Top 5 Software in nadiifi Your Mac
Ka dib adiga oo isticmaaleya isticmaale Mac muddo dheer, waxaad ka heli doontaa in lagu kaydiyo waa yar oo yar yar, inkasta oo aad tirtirto qaar ka mid ah files aan waxtar lahayn oo bilaash ah ilaa meesha bannaan ee. Xaqiiqdu waxay tahay in faylasha aad tirtiray weli ka jiraan on your Mac laakiin invisiable oo ay jiraan kaydadkii badan. Haddii aad rabto in aad si fiican u nadiifi aad Mac, waxaad isku daydaa inaad xirfad Mac software nadiif ah. Hoos waxaa ku qoran 5 codsiyada ugu caansan sare waxaad isku dayi kartaa. Maqaalkani waxa uu daboolayaa 2 qaybood. Hubi mid ka mid ah in aad xiisaynayso in:
Qaybta 1. Top 5 Software in nadiifi Mac
Qaybta 2. Waa in aad la socotid ka hor inaad nadiifiso Mac
Waxaan helay this qalab lagu nadiifiyo Mac soo saarka super si degdeg ah oo ku riyaaqay nadaafadda 2.3 GB in kaliya 15 ilbiriqsi. Waxa uu ahaa mid cajiib ii ah in aan ku samaynay hawshan adag ah nadaafadda in kaliya 15 ilbiriqsi.
Mackeeper sidoo kale waa aalad wanaagsan oo lagu nadiifiyo ayaa helay xawaaraha iyo kaamilka ah. Waxaa si deg deg ah iska saaraysaa qashinka oo dhan oo aad bixisaa PC cusub. Aniga ayaa saas loo isticmaalo in lagu nadiifiyo PC oo intay soo qaadeen qaar ka mid ah 10-20 sekan si meesha looga saaro dhammaan faylasha khasnado aan la doortay ee.
In kastoo aan la tartami karin labada alaabta wax lagu nadiifiyo hogaaminaya laakiin weli waxaa aad shaqo ka qaban kartaa gudahood daqiiqo ah.
MacCleanse waa software hufan degdeg ah oo caafimaad qaba in meesha laga saaro dhammaan trashes ee laga heli karo Mac. Wax ka badan hal daqiiqo qaadataa in ay ka saarto xogta ilaa 2 GB.
Biirsaday http://www.maintain.se/cocktail/ $ 19.00
Sida ay ku raaxaystaa interface fudud oo soo jiidasho leh, xawaaraha nadaafadda files xun waa mid aad u sarreeya. Waxay garaaci karto xitaa ma ka. 4 iyo 3 ee xawaaraha. Waxaan u isticmaalaa oo la nadiifin oo aan pc kaliya 30 ilbiriqsi gudahood.
Waxaa jira dhowr ah dukaamada online iyo leben-iyo-madfac kuu ogolaanaya in aad ku ganacsan hore iPhone. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aad iibiso isticmaalo iPhone, waa in aad la sameeyo cilmi-yar oo ku saabsan ka kaydiso tahay badan tahay si aad u hesho inta badan, taas oo dukaan wax fudud in aad u iibiso aad, kaas oo lacag bixinta habka aad jeceshahay in aad hesho. Hoos waxaa ku qoran ugu sareeya 10 dukaan oo aad qaadi karto tixraac.
CleanMyMac2 waa qalab lagu nadiifiyo adduunka ugu jecel MAC oo u suurta galinaya in aad nadiifisid aad Mac PC in ilbiriqsi oo waa inaad u samaysaa si dhakhso ah sida gantaalada ah. Dhammaan muraajiceeyey software weyn sida CNET, Macworld, Tucows iyo kuwa kale ayaa lagu tiriyaa qalab lagu nadiifiyo Mac sida app kaamil ah nadiifinta oo dhan files aan waxtar lahayn iyo dadajiso PC ka.
Full PC Scan: baaritaano aad Mac ka mid geeska mid kale ka saareen xusuustoodii oo dhanna waddooyinka maran ka disk drive adag iyo samaynta orod PC sida gantaalada oo kale!
Safe Mac Nadiifi: CleanMyMac2 waa caqli shaqaysa. Kaliya waxay tirtirtaa waxa aan waxtar lahayn iyo baxo waxa aadka u qiimaha badan ee aad si. Taas macnaheedu ma shilalka ka sii xun ee is dhan ku dhex rogrogmadaan sawiradaada.
App Uninstaller: app uninstaller Eebaha gelineya inaad saarto xataa barnaamijyadooda size weyn si deg deg ah.
Jadwaliye: inta badan aad illowdo in aad nadiifisid aad Mac? Jadwaliye Tani caqli leh oo CleanMyMac2 xajisan lahaydeen aad PC xaalad caarada sare leh iyadoo la fogeynayo files aan waxtar lahayn waqtiga.
iPhoto optimizer: No sawiro dheeraad ah oo nuqul. Gaarka ah muuqaalada optimizer iPhoto ka saaraysaa oo dhan files nuqul samaynta xog PC aad u gaar ah oo cusub.
Large files scanner: Macna ma laha inta badan oo file ah waxaa, waxa ay goobtii uu baaritaanku dhammaan faylasha iyo iyaga ka saaraysaa in yar seconds.
Talaabooyinka ay u isticmaalaan CleanMyMac2
Tallaabada 1. Daahfurka app iyo fiirino deggan interface.
Tallaabada 2. Tag iyo ilaa dhankiisii ​​bidix iyo hubi / uncheck maylka ah, faylasha, hara iyo fursadaha kale ee iskaanka.
Tallaabada 3. Marka go'aansaday waxa si scan iyo hubiyo, waxaad tagtaa xagga hoose ee bidixda hoose oo ka dhacay button scan cagaaran dhalaalaysa.
Tallaabada 4. Marka iskaanka dhameystiray, waxaad mar kale la siin doonaa fursad u ah in lagu hubiyo / qaybaha uncheck in aad rabto in aad ka saarto, go'aan waxaa sii soco garaacid badhanka buluug ah oo u dhalaalaya sidii nadiif ah loo magacaabay.
Tallaabada 5. dhowr ilbiriqsi gudahood, waxaad arki doontaa natiijada habka nadiifinta.
Mackkeeper ayaa loo dhigay 5 stars dhowr jeer dad qiimeeyayaal weyn sida softonic, CNET, Brothersoft iwm 16 barnaamijyadooda xirmo kama dambaysta ah ee Mackeeper waa xirmo super dayactirka aad PC. Waxa aanu nadiif ah oo kaliya oo aad PC laakiin waxay caawiso si ay u ilaaliyaan kartiyeed iyo xawaaraha.
Instant Mac Nadiifinta: si nabad ah oo si tartiib ah Daahiriyo files oo dhan aan waxtar lahayn oo kale abuse, khasnado, files binary iyo baakado af halka samaynta orod PC si degdeg ah.
Disk Isticmaalka: map qurux badan oo ka mid ah disk rinji midabbo kala duwan soo bandhigista waxa files ayaa qabsaday qeyb ka mid ah waxa lagu kaydin jiray. Waxay kaa caawinaysaa in aad si loo garto waxyaabaha aan waxtar lahayn waxaa lagu qabtay meel disk iyo waa in la saaro hal mar.
Akownnada la locater: Wuxuu ka caawiyaa in aad heshaan oo dhan files nuqul, sawiro laga heli karo disc adag oo iyaga goobtii ka saaraysaa.
File locater: Wuxuu ka caawiyaa helitaanka faylasha lumay xataa haddii aad ilowday magacooda. Calan shuruudaha raadinta kuu gaar ah iyo bilaabi sahaminta xogta aad laga badiyay.
Shredder Active: sinabba habkaani nadiifinta Mac dheeraad ah oo wax ku ool ah ka dhigaysa iyadoo la fogeynayo files aan loo baahnayn iyo nadiifinta boos dheeraad ah u isticmaalka a PC nadiif ah.
Uninstaller falsan: Waxaad uninstall karaan dhamaan barnaamijyadooda aan waxtar lahayn ama barnaamijyada aan loo eegayn sida yar ama wayn ee size ay yihiin.
Talaabooyinka ay u isticmaalaan MacKeeper
Tallaabada 1. Ku rakib app Mackeeper oo ku abuurtaan mar habka loo xirxiro ay ka badan tahay.
Tallaabada 2. Tag geeska bidix ee sare ee interface ah oo ay helaan "mid click scan" button. Hit button iyo geedi socod lagu iskaanka bilaabi doonaan.
Tallaabada 3. Marka geedi socodku waa dhameystiran, isticmaalka furaha siiyo hoose ee interface "look deg deg ah" si loo eego faylasha kuwaas oo ammaan ah si loo soo saaro iyo kuwa aan.
Tallaabada 4. Isticmaalka "hubiyo / uncheck" furayaasha "look deg deg ah" oo muhiim ah oo ayan ku jirin in ay go'aan ka gaarto waxa inaad xajisaan oo waxa si meesha looga saaro.
Tallaabada 5. Marka la hubiyaa, ku dhacay button wuxuu tegsiiyaa hoos ku siiyo si meesha looga saaro kuwa aan loo baahnayn oo dhan files ka.
Complete xirmo dayactirka MAC A mid istaahila in la tartamaya ee kor ku xusan laba madaxda warshadaha. Waxaad bixisaa qaab badnaan halka samaynta wax kasta oo aad u fududahay in ay la tacaalaan. Interface Simple iyo aad u raaxo.
Taariikhda Archives: Bixisaa kuwa dhammaan faylasha taariikh aan la isticmaalin ku deldesheen oo ka badan ee meel disk aad.
Luqadaha aan la isticmaalin: Bixisaa dhammaan faylasha luqad aan la isticmaalin ka barnaamijyadooda kala duwan iyadoo ay ka shaqeynayaan dhawrsan.
Qashinka & downloads, ilaa nadiifiyaa qashinka oo dhan ay karaan isla oo si joogto ah iyadoo files loo baahan yahay in lagu kaydiyo.
App ee hadhaaga Faydi: Mararka qaarkood Apps tago files ay PC markii uninstalled. DetoxMyMac ka saaraysaa oo dhan files kuwa Sarre iyo xawaaraha PC.
Tiraa khasnado files: Bartilmaameedyada dhammaan faylasha khasnado oo iyaga ka saaraysaa goobtii si loo hubiyo in xawaaraha super degdeg ah ee aad PC.
Bixisaa abuse, Warar & walax kale: Ka dhigayaa meel dheeraad ah oo lacag la'aan ah oo ay baabi'inta dhan Guda aan loo baahnayn oo ah alaabtii kale.
Talaabooyinka ay u isticmaalaan DetoxMyMac
Tallaabada 1. Ku rakib app ah iyo waxa maamula.
Tallaabada 2. Tag skaanka degdeg ah oo aad Mac si loo hubiyo waxa uu ku jiraa aad PC oo la taasoo keentay in ay hoos.
Tallaabada 3. Marka scan ay ka badan tahay, qaybaha doorashada bar bidix si ay u go'aamiyaan wixii gudbiyo aad rabto in aad ka saarto.
Tallaabada 4. Hit button qaad in meesha laga saaro walax aad doonayso inaad ka.
Tallaabada 5. Ku raaxayso super si degdeg ah oo la nadiifiyaa Mac ah ee seconds.
MacCleanse waa keentay qalab kale Mac nadiifinta oo dhan saaraysaa files rabin, warar, abuse iyo faylasha kale aan waxtar lahayn si aad Mac u ordayaan sida mashiinka super. Available in qiimaha ugu hooseeya ee marka la barbar dhigo waxyaabaha warshadaha ee keentay weli uu awood u leeyahay in la nadiifiyo ilaa aad PC si hufan oo loo mashiinka fudud miisaan sameeyo.
Cache Faydi: Kolkiiba ka saaraysaa oo dhan files khasnado aad si aad Mac dareemaan ligher.
Taariikhda Eraser: tirtiro taariikhda online ka ah Mac si ay u ilaaliyaan online hortiinna oo kaa caawinaya in aad ka files taariikhda la isticmaalin lacag la'aan ah aad PC.
Kukiyada Coobbi: nadiifiyaa oo dhan cookies in ay yihiin isticmaalka lahayn, waayo, waxaad weli qabsaday dhul badan oo ah aad disk.
Scanning Secure & Fast iyo saarista: Sawirro iyo ka saaraysaa oo dhan files aan la rabin oo aan waxtar lahayn in dhowr ilbiriqsi.
Interactive interface weliba Complex: Guud ahaan tan nadiifin Mac diirada saaraya ilaalinta joogitaanka online ee isticmaala oo uu leeyahay falgal interface quruxsan fiican laakiin newbie ee waa yara adag inay isticmaalaan.
Talaabooyinka ay u isticmaalaan MacCleanse
Tallaabada 1. Ku rakib app oo u abuurtaan.
Tallaabada 2. Ku bilow ah "scan deg deg ah" si ay u arkaan waxa files, cookies, hadhaaga u baahan tahay in laga saaro.
Tallaabada 3. In natiijada, hubi waxyaabaha in aad rabto in meesha laga saaro oo ka dhacay meesha laga saaro button.
Tallaabada 4. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa uninstaller in uninstall ee Chine / barnaamijyada aan la isticmaalin.
5. is biirsaday
Biirsaday inkastoo lagu qiimeeyo sida jirin. in aan imtixaan qiimayn shakhsi ah, laakiin weli waa ka wanaagsan in badan oo ah qalab lagu nadiifiyo Mac kale laga heli karaa internetka. Wax macno ah ma bixiyaan dabacsanaan iyo waxqabadka loo siman yahay qalabka kor ku wada hadleen, laakiin weli waa qalab aad u anfacaya si ay u ilaaliyaan aad Mac PC qiimo yar yahay. Waxaa ka mid ah dhammaan sort goobaha nadaafadda kuwaas oo ku qoran hoos ku qoran:
Plain iyo fududahay in la isticmaalo interface: Macna ma laha inta cufan aad PC waa, madadaalo fudud & is biirsaday ee ay u isticmaalaan interface kaa caawinaysaa in aad la baabi'iyo dhammaan faylasha aan la rabin in go hal.
Repair & tayadoodii: Wuxuu ka caawiyaa aad u hagaajinno aad Mac PC by fulinaya disk ah nadiifinta imtixaanka si kor loogu qaado xawaaraha Mac.
Nadiifi Faylal ay la isticmaalin: kuu ogolaanaya in aad ka saarto dhammaan faylasha la isticmaalin halka hortagga files qiimaha leh.
Bixisaa abuse, khasnado: No more khasnado lagu cabudhiyay PC. Waxaa ka saaraysaa khasnado oo dhan iyo Guda in ay yihiin isticmaalka lahayn si aad u hubiso PC ma dhamaan cuslaatay.
Talaabooyinka ay u isticmaalaan is biirsaday
Tallaabada 1. Ku rakib app oo ku abuurtaan mar.
Tallaabada 2. Waxaad arki doonto interface fudud oo soo jiidasho leh oo muujinaysa tabs kala duwan sare ee app.
Tallaabada 3. Scroll iyada oo isha ku kala duwan sida saxannada, files iyo kuwa kale oo aad ka arki doonaa waxa aad bixisaa.
Tallaabada 4. Faylal ay tab awood u lahaa in aad nadiifiso files rabin ka Mac.
Sure, iyadoo la isticmaalayo mid ka mid ah software sare ku xusan, aad Mac noqon doonaa caato ah oo nadiif ah. Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta nadaafadda aad Mac, waa in aad loo hubiyo ma jiraan wax xog muhiim ah in ay la tirtiray on your computer. Haddii kale, iyadoo wax nadiifinayaa, oo dhan oo iyaga ka mid weligiis doono. Markaas laga yaabaa inaad tiraahdo sida aan ka fiirin kartaa haddii uu jiro xogta aan u baahanahay iyo in kale. Waxaad isticmaali kartaa Wondershare Data Recovery for Mac your computer si scan. Dhammaan xogta ay hesho lagu soo bandhigi doonaa, ogolaanshaha aad Falanqeynta, sida sawirada, videos, waraaqaha, files audio, iwm Hoos waxaa ku qoran 3 talaabooyin fudud in iskaan xogta on your computer la Wondershare Data Recovery for Mac.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac u leedahay in la isku day!
Ka dooro "lumay Recovery File" mode. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si aad u ogaato faylasha tirtiray amarka + Delete ama weelna qashinka. Haddii aad dareento in aad u baahan tahay baaritaan qoto dheer, ka dibna waxaad dooran kartaa fursadaha kale ee ku saabsan suuqa kala ugu weyn.
Waxaad tahay inuu soo xusho drive adag meesha aad tirtiray files si aad u iskaan ama guji "Scan" si ay u baadhaan faylasha aad tirtiray.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan files
Scan ka dib, aasaasay faylasha lagu soo bandhigi doonaa. Waxaad ku riixi kartaa inay ku eegaan faylka. Haddii ay tahay mid aad u baahan tahay, guji "Ladnaansho 'u badbaadin on your Mac. Maskaxda ku hay in aadan badbaadin faylasha kabsaday ku meel ka mid ah inaad halkaas iyaga ka lumay, ama dib u soo kabashada guuldareystaan ​​laga yaabaa.
> Resource > Top List > 5 Codsiyada Most Popular in nadiifi Mac